“သူ့ဘက်” ကမှားတာပါ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “သူ့ဘက်” ကမှားတာပါ….
Posted by အဂ်စ္ on Apr 10, 2013 in Copy/Paste | 12 comments
သူမွေးဖွားလာဖို့ “သူ့မိခင်ဘယ်သူ”ဆိုတာ “သူ့မှာ” ရွေးခြယ်ပိုင်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူး…
သူကောင်းမွန်စွာကြီးပြင်းလာဖို့ “သူဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး….
“သူ့မှာ” ရှိခဲ့တဲ့ အကြောက်တရား ဆိုတာ နေ့ဖြစ်ဖြစ် ည ဖြစ်ဖြစ် တူတူပဲ..
“သူ့”ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ နဲ့
တစုံတခုကို ရေးချဖို့ “သူသင်တဲ့ စာ”ဆိုတာဟာ ပညာ မဟုတ်ခဲ့ဘူး…
“သူ” အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာသိလာတာက သူ့ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အနိုင်ရတဲ့ သူတွေပဲ ဆက်လက်ရှင်သန်နေရမယ် ဆိုတဲ့ နိယမ
“သူ” ဆုတောင်းတိုင်း သူ ကြားနေတာက “ကိုယ် စိုက်တာပဲ ကိုယ်ရိတ်သိမ်းရမယ်သား တဲ့”
“သူခံစားနေတာ” က နားကျည်းမှု … နဲ့ သူ့ကိုသူစတေးမဲ့ စိတ်ဓတ်…
သူရပ်နေတဲ့ ဘက်ကို တခြား တဖက်ကကြည့်တော့ “သူက” အစွန်းရောက်…
အကြမ်းဖက်သမား ၊ သူပုန် … ဆိုတာကို “သူနားလည်တာက” သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူ့အခွင့်ရေး…
(ပုံအချို့ကို kaung Htet from burma နှင့် google မှယူပါသည်)
ဖျားးးးး ဖျားးးးးး သူ့ဘက်ကမှားတာပါဆိုလို့ အပြေးလာကြည့်ရတာ ….
ခုတော့ နာ(ငါ့)ဘက်ကမှားတယ်လို့ပြင်ပါတယ်… သူလေးရေ..:)
အင် သူရေးမှပဲ သဗုန်ဒွေကို သနားရတော့မလိုလိုပဲ။
တဘဝလုံးစာ ထိုးကျွေးခံရတဲ့ နယ်ရုပ်တွေက
ကမ္ဘာတလွှားမှာ များမှများ……. ပဲ
တချို့ချို့ဘဝတွေက တဂယ်ကို ရွေးချယ်စရာ ရှိကြဘူးနော်
တော်သေးရဲ့ ဒီအမေ ဒီအဖေ ဒီမြေနဲ့ ဒီလူမျိုးမှာ လူလာဖြစ်ရလို့
မဟုတ်ရင်တော့ ဖရား ဖရား…
ဟိုနိုင်ငံက ကလေးတွေ ဆိုရင်
သူပုန်လုပ်ရရုံတင်မက ၊ မန်းတူမန်းပါ ကျင့်ခံရသေးတာကလား
ကော်မန်းတွေကို ကျေးဇူးဗျာ..ကျွန်တော်တို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန် လို့ခေါ်သူတွေကို ဂျပန်တွေက သူရဲကောင်းလို့ခေါ်နေတယ်….ဂျူးတွေရဲ့သေမင်းတမန်က နာဇီတွေရဲ့ဘုရားသခင်ပဲ…ဆိုတော့ အမှန်တရားဆိုတာ ဘက်မပါတဲ့ အရှိတရားဆိုရင်ဘယ်လိုနေဖြစ်မလဲလို့…..
ဒါကြောင့် ပြောတာပါ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ပါတ်သက်ရင် မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာ
သူ မမှားပါဘူး.. .. သူ့မှာ ရွေးချယ်ခွင်ဆိုတာမှ မရှိခဲ့တာ.
သူကောင်းမွန်စွာမကြီးပြင်းရတာ.. လောက်ငတဲ့ အထောက်အပံ့ မရှိခဲ့တဲ့အတွက်မို့ သူမမှားပါဘူး..
အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သူမို့ .. ကြောက်မိတဲ့သူ့ခမျာ မမှားပါဘူး..
စာတွေးမတွေးခဲ့ရဘဲ ဘဝအတွေးပဲ တွေးနေရလို့ .. သူ ပညာမတတ်တာ မမှားပါဘူး..
အနိုင်ယူချည်းခံနေရတဲ့ သူ.. အရှုံးပေးချင်နေတယ်ဆိုတာ သူမမှားပါဘူး..
ဆုတောင်းများက မပြည့်ခဲ့သူမို့ .. သူလုပ်မှ သူရမယ်ထင်တာ သူမမှားပါဘူး.
နာကျည်းမှုကို ခံစားနေရပေမယ့်.. သူကြင်နာတတ်တယ်..
အစွန်းရောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာ အမှန်တရားတခုရှိတယ်..
သူပုန်ဆိုတဲ့သူ့ဘဝဟာ.. သေရင်တောင်သူ့ကို မြေမြုပ်ပေးမယ့်သူမရှိဘူး ..ဆိုတာပဲ သူသိတယ်..
ဒီလိုပါပဲ တွေးရင်းနဲ့ မန့်ကြည့်တာပါ.. ဂျစ်ရေ.. ချိတ်မချိုးနဲ့ ခင်ည.. ဂျစ်ဆိုလိုချင်တာလေးကလည်း ပီပြင်နွန်းနို့ပါခင်ည..
သတ္တဝါတစ်ခု ကန်တစ်ခု…….(မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေဘုရား ရောက်တဲ့အခါလေ့လာနိုင်ပါသည်)
မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ၄-ပါးကို ပါဠိလို “ဗြဟ္မဝိဟာရ”၊ မြန်မာလို “ဗြဟ္မစိုရ်” တရားလေးပါး ဟုခေါ်သည်။ (ဗြဟ္မ = မြတ်သော + ဝိဟာရ = နေခြင်း။) “သတ္တဝါတို့အပေါ်၌ မေတ္တာပွား၍ ဖြစ်စေ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတို့တွင် တစ်ပါးပါး ပွား၍ဖြစ်စေ နေခြင်းသည် မြင့်မြတ်သော နေခြင်းဖြစ်သည်”ဟု ဆိုလိုသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရည်မှန်း၍ “ချမ်းသာပါစေ” အာရုံပြုနေသောအခါ မိမိ၏့် မေတ္တာပွားခြင်းကိုပင် “မေတ္တာပို့သည်”ဟု ယခုကာလ သုံးစွဲကြသည်။
ကရုဏာ၏ သဘောကား ဆင်းရဲနေသူကို မြင်ရကြားရသောအခါ ထိုဒုက္ခမှ လွတ်စေလိုခြင်း၊ ကယ်ဆယ်လိုခြင်း သဘောဖြစ်၏။
“မုဒိတာ”ဟူသည် ချမ်းသာနေသူကို မြင်ရကြားရသောအခါ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ခြင်း။ ထိုရရှိနေသော စည်းစိမ်ချမ်းသာမှ လက်မလွတ်စေလိုခြင်းတည်း။
ဥပေက္ခာပို့ရာ၌ ပါဠိလို “ကမ္မဿကာ” မြန်မာလို “ကံသာလျှင် ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာရှိသည်။ ကောင်းလည်း သူ့ကံ၊ ဆိုးလည်း သူ့ကံ”ဟု ပို့ရသည်။ ဆိုလိုရင်းကား – ငါက ချမ်းသာအောင် မေတ္တာပို့သော်လည်း သူ့ကံရှိမှ ချမ်းသာမည်။ ငါက သနားသော်လည်း သူ့ကံရှိမှ ဒုက္ခက လွတ်မည်။ သူချမ်းသာနေသည်ကို ငါက ဝမ်းမြောက်၍ ဤစည်းစိမ်ချမ်းသာမှ မလွတ်စေလိုသော်လည်း သူ့ကံရှိမှ ဤစည်းစိမ်နှင့် ဤအသက် မြဲနိုင်မည်။ သို့ဖြစ်၍ ငါကြောင့်ကြ စိုက်ဖွယ်မလို “ကမ္မဿကာပဲ”ဟု ဆိုလိုသည်။
မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ၄-ပါးကို အမြဲအစဉ်လိုက် ဒီလိုပဲ စီစဉ်ထားတဲ့တွက် မေတ္တာ နဲ့ စပြီး နောက်ဆုံးမှ ဥပေက္ခာ နဲ့ဆုံးရမယ်လို့ယူဆပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ကျနော်(တို့)က ဥပေက္ခာ ကနေစနေသလားလို့ပါ… (ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိဘူးတွေးမိတွေးရာရေးမိရေးရာပေါ့)
နေဝင်ဆည်းဆာအချိန် ကမ်းခြေမှာသူတစ်ယောက်တည်း လျှောက်သွားရင်းက ဟိုးအဝေးဆီမှာ လူတစ်ယောက်လှမ်းမြင်ရသည်။ နည်းနည်းနီးလာတော့ဒေသခံတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိသည်။ သူလူကကမ်းခြေသောင်စပ်မှာ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့်သွားနေရာက တစ်စုံတစ်ရာကိ်ု ငုံ့ကောက်ကာ ပင်လယ်ရေထဲလွင့်ပစ်သည်။ သည့်နောက် အဲသည်လိုပဲ နည်းနည်းလျှောက်သွားလိုက် တစ်ခုခုတွေ့လျှင် ကောက်ယူလိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်လုပ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ သူ့အနား ရောက်သွားပြီးသေသေချာချာ ကြည့်တော့လှိုင်းနဲ့ ပါလာပြီး သဲသောင်ပြင်ပေါ် တင်ကျန်နေသည့် ကြယ်ငါးတွေကိုရေထဲပြန်ပစ်ထည့်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက် ရသည်။
သည်လူ ဘာရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်နေသလဲ ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ စဉ်းစားမရဖြစ်သွားသည်။ သို့နှင့်သူ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး တည့်တည့်ပင် မေးကြည့်သည်။ “မသိလို့မေးပါရစေဗျာ ၊ မိတ်ဆွေဘာလုပ် နေတာပါလိမ့်”
“ကြယ်ငါးတွေ သမုဒ္ဒရာထဲပြန်ပို့ပေးနေတာလေ ၊ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ၊ ဒီရေကျချိန် သောင်ပြင်ပေါ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေဟာရေတက်တဲ့အချိန်ရောက်အောင် ဒီမှာ အကြာကြီး စောင့်နေရမှာ ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်ကြာရင် အောက်ဆီဂျင် ပြတ်ပြီးသေမှာပဲ”
“ဟုတ်ကဲ့ ၊ အဲဒါတော့ကျွန်တော်လဲ သဘောပေါက်ပါတယ်” ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေက ဆိုသည်။ “ဒါပေမဲ့ ဒီကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာ ကြယ်ငါးတွေထောင်ချီပြီးရှိနေမှာပေါ့ဗျာ ၊ အဲဒီကောင်တွေ အားလုံး ခင်ဗျား ဘယ်လိုလိုက်ကောက်မလဲ၊ တစ်ယောက်တည်းမနိုင်နိုင်ဘူးလေဗျာ ၊ ပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့် ၊ ဒီကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆိုရင် ခုလို သဲသောင်ပြင်ပေါင်း ရာချီရှိမှာပေါ့ ၊ ဒီသောင်းစပ်တိုင်းမှာရှိနေမယ့် ကြယ်ငါးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ ၊ သူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတာခင်ဗျား တစ်ယောက်ကြောင့် ဘာတွေ ထူးခြား ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ”
ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြုံးသည်။ နောက်ထပ်ကြယ်ငါးတစ်ကောင် ကောက်သည်။ ထို့နောက် “တခြားကောင်တွေအတွက် မထူးခြားပေမယ့် ဟောဒီ ကြယ်ငါးတစ်ကောင်အတွက်တော့ ထူးခြားသွားတာပေါ့ဗျာ” ဟုဆိုကာ ပင်လယ်ရေထဲ လှမ်းပစ်ထည့်လိုက်သည်။